ENGLAND VS ITALY: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
(London) 27 Maarso 2018 – Waxaa caawa gegada ugu wayn England ee Wembley Stadium oo ah qalcadda dalkaasi ku ballansan qaramada waawayn ee England oo martigelinaysa Italy oo sanadkan TV-ga ka daawanaysa KA2018.
Kooxda Gareth Southgate waxay walaac dhanka dhaawac ah ka qabtaa dhowr xiddig. Laacibka khadka dhexe ee Jack Wilshere ayaa ku maqan dhaawac jilibka ah oo gaarey muddo yar kahor, si la mid ah, daafaca Ryan Bertrand oo dhabarka ka sheeganaya ayaa Wilshere la saaran miiska dawada.
Daafaca Liverpool ee Joseph Gomez ayaa anwaqga ka xanuunsanaya, waxaana kulankan ka nasinaya Harry Maguire. Jamie Vardy ayaa bedelaya Marcus Rashford.
Laacibka Marco Verratti oo kulankii hore jugo kasoo gaareen ayaa shaki kaga jiraa ciyaarta caawa ee England. Kaddib guuldarradii ay 2-0 ku dhufteen Argentina, Luigi Di Biagio ayaa lagu wadaa inuu isbeddello ku sameeyo safka 1-aad.
Bryan Christante ayaa beddeli kara Verratti, sido kale, Lorenzo Pellegrini iyo Antonio Candreva ayaa lagu wadaa in ay nasiyaan Marco Parolo iyo Federico Chiesa.
Shaxda suurtagalka ah ee England (3-4-3)
DEF: Walker (RB), Stones (CB), Maguire (LB)
MID: Trippier (RM), Chamberlain (RCM), Henderson (LCM), Rose (LM)
FOR: Sterling (RF), Vardy (CF), Lingard (LF)
Shaxda suurtagalka ah ee Italy (4-3-3)
DEF: Florenzi (RB), Bonucci (RCB), Rugani (LCB), Sciglio (LB)
MID: Pellegrini (RM), Jorginho (CM), Cristante (LM)
FOR: Candreva (RF), Immobile (CF), Insigne (LF)
Messi oo ka nixiyay taageerayaasha Argentina iyo Barcelona kadib tababarkii shalay (Hadal uu yiri oo la ogaaday)